Dalalka Sucuudigu Hoggaaminayo Oo Saddex Iyo Toban Qodob Shuruud Ugu Dhigay Heshiiska Dalka Qadar - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Dalalka Sucuudigu Hoggaaminayo Oo Saddex Iyo Toban Qodob Shuruud Ugu Dhigay Heshiiska Dalka Qadar
Riyadh(ANN)-Afar Ka mid ah dalalka Carbeed dawlada Qadar ka Dalbaday in ay fuliso liis ay ku qoran yihiin 13 qodob oo ay waajibtahay in ay fuliyaan haddii ay Qadar doonayso in laga qaado xayiraadda ay saareen, sida ay wakaaladohoodu shaaciyeen.
Sacuudi Carabiya, Masar, Isutagga Imaaraadka Carrabta iyo Baxrayn ayaa waydiisanaya Qadar in ay xidho oo albaabada u laabto warbaahinta caalamiga ah Al-Jazeera.
Waxaa kale oo ay dawladaha Afarta ah waydiisteen Qadar in ay yarayso calaaqaadka ay Iiraan la leedahay, Isla markaana xidho saldhiga uu Turkigu ku leeyahay Qadar, waxaana loogu baaqay in shuruudahaas oo dhanna ay ku fuliso muddo 10 maalmood gudahood ah.
Dawladda Qadar ayaa isku fogaysay eedo Oo diiday in ay maalgaliso argagixisada iyo in ay dhiirigalinayso degenaansho la’aanta gobolka, taasoo ahayd eedaha ay hore ugu soo jeediyeen Afartaa dal ee Carbeed.
Xarunta Al Jaziira
Dalka Qadar labo toddobaad waxa saaran xayiraad dhaqaale iyo mid dublamaasiyadeed Oo Ay kusoo rogeeen Afartaa dal, arrintaas oo aan la filaynin ayaa noqotay culayskii ugu waynaa ee dalalka Khaliijka ka dhacda muddo tobannaan sano ah.
Xadka Suvuudiga Iyo Qadar Oo xidhan
Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AP, shuruudahan ayaa lagu xidhay dalka Qadar:
Inay xirto telefishinka caalamiga ah ee Al Jazeera iyo laamaha warbaahineed ee xidhiidhka la leh.
Inay u diido inay dhalasho siiso muwaadiniinta afarta dal ee xidhiidhka u jaray, kuwa hadda joogana ay dalkeeda ka caydhsio. Waxay sheegeen in taasi ay horseedi doonto in Qadar aanay faragelin ku sameyn arrimaha daakhiliga ee dalalkaasi.
Inay aqbasho baadhitaano iyo dabagal joogt ah oo lagu eegayo sida ay u fulineyso dalabaadkan bilaha iyo sanadaha soo socdo.